Gbasara Anyị | Hebei Chuangqi fitgbọ ala oyiyi akwa Co., Ltd.
Anabata gị CHUANGQI
Hebei Chuangqi Vehicle fittings Co., Ltd. e guzobere na 2020 na ọ bụ ọkachamara na roba sooks emeputa.
Thelọ ọrụ ahụ na-ekpuchi hectare 5 na mpaghara ogbako ahụ bụ square mita 45,000. Anyị nwere a zuru ezu roba inggwakọta usoro, oyi oriri extrusion usoro, ngwa ndakwa nri vulcanization usoro na elu-ọsọ ịkpa usoro na ndị ọzọ na mmepụta ahịrị.
Site na ihe karịrị afọ iri nke na-aga n'ihu mgbalị, ụlọ ọrụ amụbawo oru ego na ẹkenam oru pesonel. The ụlọ ọrụ nwere 12 injinịa na oru pesonel, 2 agadi injinia, 4 injinia, na 6 agadi technicians. The ụlọ ọrụ nwere akụrụngwa: otu nnukwu blister akpụ igwe, abụọ polyurethane agbapụtara na-asụ ụfụfụ akụrụngwa, otu nnukwu 200-ton haịdrọlik pịa, otu 50-ton pịa, otu agụụ akpụ ngwá, na atọ n'ọnọdu shiee trimming igwe. Ihe karịrị usoro 20 nke ngwa nhazi. Site na mmalite nke otu mmepụta nke ịkpụzi polyurethane ụfụfụ na-arụ ọrụ na nke oge a na-akpụzi na mkpakọ na ịkpụzi usoro nrụpụta, anyị enwetawo ahụmịhe bara ụba. Na 2009, ụlọ ọrụ dechara ngụkọta mmepụta mmepụta uru nke 10.01 nde yuan na dechara a nkwakọba tax nke 250,000 yuan.
The ụlọ ọrụ nwere a narị Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na mgbe-sales ọrụ outlets na itieutom kpụrụ a zuru okè mgbe-sales ọrụ usoro iji belata ahịa 'nchegbu.
E guzobere Hebei Chuangqi Vehicle fittings Co., Ltd. na 2020.
Thelọ ọrụ ahụ na-ekpuchi hectare 5 na mpaghara ogbako ahụ bụ square mita 45,000.
Chuangqi nwere ikike imeputa kwa nde mita ise kwa afọ.
Ndị Ọrụ Nka na ụzụ
The ụlọ ọrụ nwere 12 injinịa na oru pesonel.
Ha niile jikọtara na ihe karịrị ụlọ 30 OEM dị ka Jinlong, Yutong, Ankai, na Zhongtong.
Mkpokọta Mmepụta Uru
Na 2009, ụlọ ọrụ ahụ mechara ngụkọta mmepụta mmepụta nke 10,01 nde yuan.
Anyị tumadi na-emepụta ulo oru hoses, dị ka ikuku hoses, mmiri hoses, mmanụ hoses, ịgbado ọkụ hoses, haịdrọlik hoses na mmiri. Chuangqi bu ulo oru na-eto ngwa ngwa nke puru iche na mmeputa hoses di ocha na hoses roba, na ikike mmeputa nke 50 nde mita.
Ha niile jikọtara na ihe karịrị ụlọ 30 OEM dị ka Jinlong, Yutong, Ankai, na Zhongtong, yana alaka ụwa nke VOLVO na India, New Zealand, Thailand, Taiwan, Poland, Israel, Britain, Egypt, Spain, Turkey, Brazil, Singapore, Germany na ihe karịrị mba 20 na mpaghara enwetawo ụlọ ọrụ na-akwado ya.
Hergbaso echiche nke "na-aga n'ihu mma, kacha mma, magburu onwe ya mma, na ahịa afọ ojuju", anyị ji obi ike weghara ọhụrụ mba technology na ngwaahịa ọmụma, mgbe niile chepụta na ịzụlite ọhụrụ ngwaahịa, na-enye ndị ahịa na-elu-na ngwaahịa.
Ezigbo ndị ahịa ochie na ndị ọhụụ, na narị afọ nke iri abụọ na otu na-agbanwe agbanwe, ụlọ ọrụ ahụ ga-egosi gị n'ihu gị ụdị ọhụụ ọhụụ, ka anyị jiri aka anyị kee echi na-egbuke egbuke ma na-egbuke egbuke. anyị nwere olile anya na ngwaahịa anyị nwere ike izute mkpa ndị ahịa ruo oke oke ma nyere ha aka inweta oke ahịa.